Shina 90% -99,9999% Fahadiovana sy fahaiza-manao lehibe PSA Nitrogen Generator mpanamboatra sy mpamatsy | OR
90% -99,9999% Fahadiovana sy fahaiza-manao lehibe PSA Nitrogen Generator
PSA Nitrogen Plant dia mandray ny fotokevitra fa amin'ny tsindry sasany, ny hafainganam-pandehan'ny oksizenina sy azota dia samy hafa amin'ny sivana molekiolan'ny gazy. Ao anatin'ny fotoana fohy, molekiola oxygène dia voapoitran'ny sivana molekiola karbonika fa ny azota dia afaka mamakivaky ny sosona fandriana molekiola hanasaraka ny oxygen sy ny azota.
Aorian'ny fizotran'ny adsorption dia hody indray ny sivana molekiola karbonika amin'ny alàlan'ny famoahana sy famoahana ny oxygen.
Ny PSA Nitrogen Plant dia ampitaina amin'ny mpitrandraka 2, iray amin'ny adsorption hamokarana azota, iray amin'ny desorption hamerenana indray ny sivana molekiola. Ny dokam-barotra roa dia miasa mifandimby mba hamokatra nitroka vokatra mendrika hatrany.
1: Ny fitaovana dia manana tombony amin'ny fihenan'ny angovo ambany, ny vidiny ambany, ny fahaizan'ny adaptation, ny famokarana entona haingana ary ny fanitsiana ny fahadiovana.
2 ： Famolavolana ny endriny tonga lafatra sy ny fampiasana tsara indrindra;
3 ： Famolavolana modular dia natao hamonjy ny velaran-tany.
4: Tsotra ny fandidiana, miorina ny fampisehoana, avo ny haavon'ny automatisation, ary azo tanterahina izany raha tsy misy fandidiana.
5 ： singa anatiny mirindra, fizarana rivotra fanamiana ary mampihena ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha;
6 ： fepetra fiarovana manokana sivana molekiola manokana hanitarana ny fiainan'ny molekiola molekiola.
7 ： Ny singa fototra amin'ny marika malaza dia ny antoka mahomby amin'ny kalitaon'ny fitaovana.
8 ： Ny fitaovana fanary mandeha ho azy an'ny teknolojia patanty nasionaly dia miantoka ny kalitaon'ny azota amin'ny vokatra vita.
9: Manana fiasa maro amin'ny famaritana lesoka, fanairana ary fanodinana mandeha ho azy izy io.
10: Fampisehoana efijery azo atao mikasika ny takelaka, fitadiavana teboka ando, fanaraha-maso fitsitsiana angovo, serasera DCS sns.
Previous: LNG Plant Nitrogen Generator Fitaovana Industrial Nitrogen Machine
Manaraka: Indostria mpamokatra azota azota PSA amidy milina fanaovana entona Nitrogen
Psa Oksizenina mameno Oxygen Generator